Unofanira kuziva vasati kunotenga imwe Hoverboard - Jomo Technology Co., Ltd
With yepamusorosoro rwokuzvipira BALANCInG unyanzvi, kaviri Kutsiga pamwe kuvakwa-mu gyroscope nerukudzo Switch, zvikuru nyore waidzora, chete kuchinja yenyu nomuviri uremu mwoyo, sikuta wako achaita flexibly uchatamisa mberi, shure, kuruboshwe, kurudyi, uye kunyange kutendeuka 360 Diploma ruvara. Imwe yenzira dzakanakisisa chinhu sikuta uyu iwe batanidza kuti Makaralı vachishandisa cellular Anwendung. Kana zvakadaro, unofanira wasarudza inonyatsobudirira chigadzirwa kuti haazorambi nokusingaperi kuuya mwoyo iwe nyaya yacho kuita. Zvino, iwe haufaniri neshungu pamusoro bhatiri. Koowheel hoverboard bhatiri vakanga yakasimba kwazvo, akadai K3 kuzviremekedza vakadengezera sikuta, kuti bhatiri mhando ndiyo 18650 yakakwirira kunyatsoshanda bhatiri masero, avhareji upenyu hwaiva 1500 zvinogara.
Handina kudemba kunotenga Powerboard kubudikidza Self vakadengezera 2 Wheel Electric sikuta kunyange achangogara uye ndinofara chaizvo tsigira nayo. The Self vakadengezera sikuta K3 pamwe Self-Kutsiga Board kubudikidza KOOWHEEL anezvakawanda yose simba kusvetukira pamusoro chero 18-degeee materu ikoko, uye kuchaita kuti vasvike dzakakwirira itsva pakarepo. Pakufamba chanyanyonakidza, kunyange zvazvo ndainzwa somunhu Kuda dzandaienda uye ona ichi asi mumwe ave vana toyi kupfuura Nzira chokufambisa. The yokuwedzera iwe vanosendamira shure kana mberi, okumusoro kumhanya muchina.
Chinhu chakanaka kusarudza kuti vanoshandisa vemazera ose. Irege sezvo zvinobudirira-nezvavo savakuru 2 kuzvipira vakadengezera Scooters pamusoro Zvisinei usanyengedzwa, rinongova akanyatsorevesa se zvakanaka. Koowheel K3 maviri vhiri kuzvidzora vakadengezera emagetsi sikuta yave ichikura kuva zvakafanira chishandiso kuti vanachiremba boka kufamba nokukurumidza pamwe siyana zvakakwana uye simba. Saka chii chinoita Koowheel Electric sikuta kudaro zvikuru? With mamiriro ayo zvose kuti takataura pamusoro uye mutengo wayo, zviri zvechokwadi "endai zvakanaka zvino uibate" sikuta. Izvi zvinogona kuva chimwe chinhu unenge kushamisika zvino kuti Krisimasi pazororo akapfuura. Powerboard kubudikidza Hoverboard ndiye sikuta unozvipa vakadengezera kuti muve mari noushamwari zvangotanga pamwe zvakanakisisa zvavanogona kuti shoko rokupedzisira chiitiko akatasva naro. Kunyange zvakadaro, pamwe inotevera muromo, kusarudza zvakanaka munhu anofanira kuva remba mupaki ..
Our yemagetsi kuzviremekedza nepakati sikuta anoshandisa gyroscope kuti noungwaru kudzora pakusimba. Dzakagadzirirwa naye mapatya gwenya simba, idzva Koowheel yemagetsi sikuta ichaongororwa mumwe kumusoro-Nzvimbo zvose "hoverboards" riri pamusika yokuwana Max aimhanya 8MPH uye 20 madhigirii pamukwidza. Segway iri singlehandedly mhosva popularization pakati pfungwa mbiri-mavhiri, kuzvicheka-BALANCInG, nebhatiri dzemagetsi motokari.
Post nguva: Jan-19-2018